12 Izindawo Ezinhle Zokuvakashela ERussia | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Russia > 12 Izindawo Ezinhle Zokuvakashela ERussia
(Kugcine ukubuyekezwa On: 29/06/2021)
Ngaphesheya kwe-taiga yaseSiberia, ichibi lasendulo iBaikal, iKamchatka yasendle iya eMoscow, lezi 12 izindawo ezimangalisayo zokuvakashela eRussia zizokuphefumula. Vele ukhethe indlela yakho yokuhamba, phakamisa amagilavu ​​afudumele noma ijazi lemvula ngesimo sezulu esikhohlisayo, futhi silandele siye eRussia.
1. Izintaba ze-Altai
Phakathi kweRussia, Mongolia, China, futhi isifunda saseKazakhstan Altai siyikhaya le- 700 emachibini, amahlathi, kanye nenani eliphakeme kakhulu laseSiberia laseMt Belushka, ngesikhathi 4506 m. I-Altai ayinabantu abaningi, ngakho-ke uzothola kungathintwanga yimpucuko yanamuhla, futhi yimvelo yasendle nezilwane zasendle kuphela ezizokubingelela.
Ngaphezu kwalokho, uma ungumhambi onamava, bese kuba uhambo oluya kunoma iyiphi i- 1499 izinguzunga zeqhwa e-Altai zizokumangaza. Ngaphezu kwalokho, i-rafting emfuleni omkhulu weKatun kanye nemifula iBiya kungumbono omuhle. Ngokolunye uhlangothi, i-safari yezilwane zasendle ingaba inketho yokuphumula. Ungathola ithuba elingandile lokuhlangana nengwe yeqhwa, i-ibex, i-lynx, futhi ngaphezu kuka 300 izinhlobo zezinyoni. Akungatshazwa, I-Altai ingenye yezinto ezinhle kakhulu izindawo zezilwane zasendle eYurophu nendawo emangalisayo yokuvakashela eRussia.
IKazan yizulu lokwakha eTatarstan Republic, entshonalanga yeRussia. Isikhungo somhlaba wamaTatar sakhiwe osebeni lweVolga, nemifula iKazanka, futhi ibhekwe njengedolobha lesihlanu ngobukhulu eRussia.
Njengoba kushiwo ngenhla, ukwakhiwa kwezindawo eziyinhloko zaseKazan kuzobamba amehlo akho ngemibala emhlophe noluhlaza okwesibhakabhaka nokuklanywa. Ngokwesibonelo, IKazan Kremlin, indawo yamagugu omhlaba, IKur Sharif Mosque, Epiphany Cathedral, yizindawo ezimbalwa ongavakashela kuzo ukuze ufunde kabanzi ngamasiko amaTatar.
3. Izindawo Ezinhle Zokuvakashela ERussia: iChibi iBaikal
Ichibi elidala kunawo wonke emlandweni womhlaba, IChibi iBaikal selakhiwe 25 eminyakeni eyizigidi edlule. Ubuso bayo obuneqhwa nobubanzi benza iChibi iBaikal likhange ubusika eSiberia, nasehlobo, ungangena emanzini acacile eYurophu, noma uhlole izilwane zasendle eziyivelakancane emhlabeni.
Ukushayela, bancoma umzila weBaikal ngezinyawo, noma ukuba ne-barbeque osebeni lwechibi elimangalisa kakhulu eRussia, uzoba ne-adventure ekhanga ingqondo. Izihlahla zikaphayini ezizungezile, ITaiga nehlane kukhona a uhambo ngesitimela kusuka edolobheni eliseduzane i-Irkutsk, enye indawo ehehayo ongayivakashela eRussia. Ukwenza konke kube phezulu, ungaqala i-Baikal adventure yakho evela eChina noma eRussia, ngesitimela iTrans-Siberia, ihlobo noma ubusika.
Idolobha laseTsars nezigodlo eziyingqayizivele, ISaint Petersburg ikhuthaze izimbongi nababhali. Uma ungazange uye eSaint Petersburg, awukayiboni ngempela iRussia, ngoba leli dolobha lingesinye sezithonjana ezidume kakhulu futhi ezihlaba umxhwele zaseRussia.
IHermitage, UCatherine Palace, isigodlo sasebusika, nezingadi zasePeterhof, kumangalisa nje. Zonke izinyathelo ozenzayo zizokudonsela eduze nenganekwane yaseRussia futhi zizokuthakatha. Umlando nezakhiwo zaseSaint-Petersburg zikwenza kube yindawo okumele ivakashelwe eRussia kanti futhi ingenye yezinto eziphezulu 12 izindawo ezimangalisa kakhulu eRussia.
Kuyasendle, enkulu kakhulu, enhle, futhi kuyamangaza, IKamchatka ikulinde cishe ekugcineni komhlaba. Inhlonhlo yaseKamchatka isempumalanga ekude yeRussia, ekhaya cishe 300 izintaba-mlilo, iningi liyasebenza, nemibono ehlaba umxhwele kakhulu oLwandlekazi iPacific kanye nehlane laseRussia. Bambalwa kakhulu abazi ngezimangaliso zikaKamchatka, ngakho-ke iKamchatka iyindawo emangalisa kakhulu futhi engavamile ukuvakashela eRussia.
Uzobona ukuthi akulula kangako ukufinyelela izimangaliso zaseKamchatka, ngenxa yendawo ekude. Nokho, uma wenza, uzomangala ngokumangaza imvelo, izimangaliso zemvelo: le iziphethu, emifuleni, izilwane zasendle, futhi-ke izintaba-mlilo. A uhambo lwentaba-mlilo kungenye yezinto ezimbi kakhulu futhi ezijabulisayo ongazenza eKamchatka. Ngokwesibonelo, IKlyuchevskaya Sopka iyisiqongo esiphakeme kunazo zonke nentaba-mlilo esebenzayo, indawo oyifunayo yabahambi abaningi eKamchatka.
6. Izindawo Ezinhle Zokuvakashela ERussia: I-Sochi
Emaphethelweni oLwandle Olumnyama, zizungezwe izintaba eziluhlaza nezindawo zokungcebeleka, ISochi yindawo yokugcina yamaholide ehlobo eRussia. I-Sochi ithandwa kakhulu ukuthi idolobha liheha 4 abantu abayizigidi minyaka yonke, okwabo iholide lasehlobo ngasolwandle.
Ngaphezu kokugeza ilanga, I-Sochi Arboretum, noma i-Italy encane, ilungele ukubukwa kwepanoramic koLwandle Olumnyama neSochi, nokuzulazula ezingadini kubabaza amapigogo.
ukuze uphethe, ayikho indawo engcono yeholide yokuphumula, ngesitayela saseRussia, ERussia kunaseSochi. Ngakho-ke, akumangazi ukuthi ungaya eSochi usuka eMoscow nanoma iliphi iphuzu eRussia, kanye nase-Asia Ephakathi naseMpumalanga Yurophu, ngesitimela.
UVeliky Novgorod unendawo yokuhlonishwa ku 12 izindawo ezimangalisa kakhulu ukuvakashela eRussia. Ungasho ukuthi iNovogrod enkulu kulapho iRussia yaba yizwe elikhulu namuhla. Emuva ngomhlaka 9 ekhulwini, UVeliky Novogrod kulapho uPrince Rurik, e 862 umemezele umbuso wanamuhla waseRussia futhi wenza iNovogrod yaba isikhungo sezohwebo, intando yeningi, kanye nokufunda nokubhala phakathi kweRussia neBalkan.
Ngakho, uma ungumlando waseRussia, UVeliky Novogrod kufanele abe ohlwini lwakho lwamabhakede. Inqaba yaseNovogrod Kremlin, ICathhedral St. USophia ulungile 2 wezindawo okufanele ubone kuzo kuVeliky Novogrod ezizokumangaza. Imele i- 800 iminyaka, cabanga nje ngezindaba nezehlakalo ezenzeka lapha.
8. Izindawo Ezinhle Zokuvakashela ERussia: Isiqhingi sase-Olkhon
IChibi iBaikal likhulu kakhulu, ukuthi bekufanele sengeze enye indawo emangalisayo umuntu okufanele ayivakashele lapho eseRussia. I-Olkhon Island iyisiqhingi esikhulu kunazo zonke eLake Baikal, ngosayizi ofanayo neNew York City. Lesi siqhingi siyikhaya lokucabanga ngamahlathi, indawo enamadwala, futhi kuphela 150000 izakhamizi, ngokungafani neNew York City.
Nokho, Isiqhingi i-Olkhon siyindawo edumile yezihambi eLake Baikal. Lokhu kusho ukuthi ehlobo ungafika uzobhukuda emanzini acwebile acwebile acwilise echibini elijule kakhulu emhlabeni. Ebusika, Ngokolunye uhlangothi, ungalithanda ichibi elidala kunawo wonke emhlabeni, ezingutsheni zayo zasebusika, iqandisiwe futhi inhle ngokumhlophe.
Lesi siqhingi siyisikebhe esivela eSakhuyurta futhi abantu baseBuryat kukholakala ukuthi bayikho 1 kwezigxobo ezinhlanu zomhlaba wonke zamandla eShamanic. Empeleni, ungathola amadwala e-shaman enkabeni yesiqhingi.
Uma usohambweni lwakho lweTrans-Siberia, lapho-ke uzoma e-Irkutsk, inhlokodolobha engekho emthethweni ye-Eastern Siberia. 19amasonto aseRussia ekhulu le-th, izindlu ezinombala onsundu noluhlaza okwesibhakabhaka, ISaiga yaseSiberia, Irkutsk - idolobha elihle zomlando.
Ngaphezu kwalokho, I-Irkutsk yake yaba yindawo yokudingiselwa kwezikhulu eziningi zaseRussia nezifundiswa eSiberia, uma uhulumeni obusayo ethatha isinqumo sokuthi baphikisana namandla. Ngakho, I-Irkutsk ne-taiga yaseSiberia zifaka imisebenzi eminingi yaseRussia yezinkondlo nezincwadi. Noma kunjalo, namuhla i-Irkutsk yidolobha elihle: vimba 13 yezindlu zokhuni zekhulu le-18, iSonto loMsindisi, kanti iBronshteyn Gallery ngezinye zezindawo okufanele uzivakashele.
10. Izindawo Ezinhle Zokuvakashela ERussia: IStolby Nature Reserve
Emabhange oMfula iYenisei, IStolby nature reserve itholakala eningizimu nje yedolobha laseKrasnoyarsk. Indawo ebekiwe ayiweli ebuhleni kusuka ku- phezulu 5 izinqolobane ezinhle kakhulu zemvelo eYurophu. Ngemuva kohambo olude esitimeleni saseTrans-Siberia sinqamula iRussia, uzothola ukuthi ukuzulazula esiqiwini kuphakamisa imimoya yakho kuvusa umzimba nomphefumulo oleleyo.
I-Stolby inayo 5 imizila emikhulu enamakhodi anemibala, ngakho-ke ngeke ulahleke emizileni eminingi yamahlathi emincane. Uma usufinyelele ekujuleni kwehlathi, uzothola umsuka wegama lesigcini. Bangu 100 stolby - izinsika zamatshe, amaqoqo amahle futhi amade ama-stolby phakathi kwezihlahla.
Ukuvakashela leli paki elihle lemvelo kumayelana nokujabulela ubunono bemvelo kamama. Akukho okufana nephunga nokubukwa kwamahlathi aseRussia, ehlobo noma ebusika. Nokho, uma uhlela uhambo lwasebusika isikhumbuzi esisheshayo sokugqoka izingqimba eziningi, njengoba iSiberia ibanda kakhulu futhi iqhwa.
I-Arbat enemibala, IKremlin neRed Square, St. Basil's Cathedral, noMfula iMoskva, isici kuwo wonke amakhadi okuposa, isithombe, futhi ucebe ngeMoscow. Nokho, uze ufike unyawo lwakho kulezi zingosi ezimangalisayo, ukuthi ubazisa ngempela ubukhulu nobuhle bazo. Akungabazeki ngentelezi enhle yaseMoscow. Ngakho, akumangazi ukuthi inhlokodolobha ingenye ye 12 izindawo ezimangalisa kakhulu ukuvakashela eRussia.
Ngenkathi iMoscow iphefumula, idolobha elingaphansi komhlaba leziteshi zikamasipala likhulu ngendlela efanayo. Idolobha uhambo lokuhamba ngomshoshaphansi eMoscow kungenye yezinto ezinhle kakhulu ongazenza eMoscow. Lapha, uzothola imininingwane eminingi ngobuciko, design, nomlando wazo zonke iziteshi, kanye nomuzi, kubantu bendawo.
12. Izindawo Ezinhle Zokuvakashela ERussia: Isiqhingi saseKizhi
Amasonto enziwe ngokhuni, umbhoshongo wewashi ohlukaniswe ngokuphelele ngokhuni, yakha iKizhi Pogost eyingqayizivele. Lesi sakhiwo esingajwayelekile sezinto ezenziwe ngokhuni senziwa ababazi, kwesinye seziqhingi eLake Onega. Uzomangala ukuthola ukuthi lolu hlobo lwemodeli lwaluthandwa ezikhathini zasendulo. Lezi zikhala zokhuni kwakuyizindawo ezithandwayo zesifunda ngekhulu le-16, futhi mhlawumbe ngaphambili.
Ngenkathi amasonto engewona umbono ongajwayelekile eRussia, amasonto ngokhuni kukhona. Isiqhingi saseKizhi siyisibonelo esihle sezingcweti zaseRussia. Isiqhingi saseKizhi siyi- UNESCO amagugu wezwe isayithi, futhi esinye sezimangaliso zomhlaba, njengesixakaxaka sonke, kufanelana ngokumangalisayo endaweni yemvelo.
Lapha e Londoloza Isitimela, sizojabula ukukusiza uhlele uhambo olungenakulibaleka kulezi 12 izindawo ezimangalisayo eRussia ngesitimela.
Ingabe ufuna ukushumeka okuthunyelwe kwebhulogi lethu “ 12 Izindawo Ezimangalisayo Zokuvakashela ERussia ”ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fzu%2Famazing-places-visit-russia%2F - (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
#i-russia I-Russia emangalisayo isonto IChibiBaikalrussia Moscow InhlesAsihlebeh E-SaintPetersburg ESiberia TranSiberiantrain Ukuhambela iRussia Vakashela iRussia